Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo qaabilay wafti ka socda dalka Masar. – Radio Daljir
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo qaabilay wafti ka socda dalka Masar.
Febraayo 14, 2017 9:21 g 0
Muqdisho, Feb 2017-Wafdi balaaran oo ka socday dalka Masar ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho kuwaas oo shir la yeeshay Madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo .
Wasiirka Arimaha Dibada dalka Soomaaliya Mr.Cabdi Salaam Hadliye Cumar iyo Danjire ku xigeenka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar oo shirkaan ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in la isku af gartay sidii labada dal ay iskala shaqeyn lahaayeen dhanka Amniga , Ganacsiga iyo Diblomaasiyada .
DHEGEYSO-Wasiirka amniga Puntland oo dalka ku soo laabtay kana kahadlay arrimo muhiim ah.